Malunga nathi -Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD yasekwa ngo-2004, yamkelwa njengenye yezona zinto zihloniphekileyo kwilizwe liphela abavelisi abaphantsi beSETYHULA SOKUGQIBELA e-China. Uluhlu olubanzi lweemveliso zigubungela amakhefu esekethe amancinci (i-MCB), intsalela yokuqhekeka kwesekethe yangoku (RCCB), amaBreaker eSekethe ashiyekileyo aKhuselekileyo (RCBO), amatyala esekethe abunjiweyo (i-MCCB), i-AC Contactor, i-thermal overload relay, i-Motor Protection Circuit Breaker , njl.
Kutheni ukhetha iCDADA?
Iqela, eliqukethe iifektri ezi-3, linendawo yemveliso engama-52,400m² kwaye liqeshe abasebenzi abangaphezulu kwama-500.
Sisebenzisa i-workshop yokubetha, i-workshop yokubumba inaliti, i-hydraulic workshop, i-welding spot kunye ne-workshop ye-riveting, i-workshop yendibano, kunye ne-workshop yokuhlola umgangatho ohlangabezana nazo zonke iimfuno zethu zokulawula umgangatho.
Iziko lemveliso linabasebenzi abangama-400 kubandakanya abasebenzi abangama-32 bezobugcisa, kunye nabasebenzi abaphezulu abayi-30. Sineengcali ezininzi zeshishini kwizixhobo zombane ezisezantsi zombane.
Ngombulelo kwesi sibonelelo siphezulu, sigqithile kwimveliso yonyaka engama-800,000 MCCB kunye neeyunithi ezingama-5,000,000 ze-MCB.
Iimveliso zethu zesekethe zenzelwe ngokukodwa ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zokufaka zabasebenzisi abancinci yonke indlela eya kwizitishi zenguqu zorhwebo kunye nezikhululo zokuhambisa umbane. Uyakufumana iimveliso zethu zifakwe kwiindawo zokugaya zentsimbi, amaqonga eoyile, izibhedlele, izikhululo zikaloliwe, izikhululo zeenqwelo moya, amaziko ekhompyutha, izakhiwo zeofisi, amaziko endibano, iithiyetha, izakhiwo zezakhiwo, kunye nasiphi na esinye isakhiwo esineemfuno zombane.
UDada uhlala ezinikele kuphuhliso nakwimveliso yeesekethe. Silwandisile ngempumelelo ishishini lethu kwihlabathi liphela ukuya kumazwe angaphezu kwama-20 kunye nemimandla eYurophu, eMelika, kuMbindi Mpuma, eAfrika nakuMzantsi-mpuma Asia.
Iminyaka emininzi, sithathe inxaxheba ekubhideni kwiprojekthi yegridi yesizwe yaseTshayina, sakha uphawu lwenkampani yethu kunye nokwandisa amandla kunye nokufikelela. Siyaqhubeka ukufikelela kule njongo ngokubambelela kwifilosofi yecandelo "Cinga ngakumbi kubathengi kwaye wenze ngcono kumthengi". Ekugqibeleni, sijolise ekwandiseni ukuqonda kolawulo lombane kwaye sizibophelele ekubeni yinkokeli ekumgangatho wehlabathi kwiimveliso zombane ezisemgangathweni. UDada ujonge ukutshintsha inkqubo yombane yaseTshayina, kodwa kunye nehlabathi.
ICDADA izinikele ekunikezeleni ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngokubonelela ngeemveliso ezivela kubavelisi abaphezulu kunye nokubonelela ngenkonzo yabathengi yenqanaba lokuqala.
• Sizimisele ukubonelela iinkampani zehlabathi ngeemveliso zesekethe ezisemgangathweni ophezulu ukunceda ukukhuphisana kwindawo yentengiso yanamhlanje.
• Iqela lethu le-R & D lijolise ekuphuhliseni itekhnoloji yesekethe entsha yokuqinisekisa ukuba abathengi bethu banazo iimveliso ezisemgangathweni ophezulu.
• Abasebenzi bethu banamava ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava abonelela ngenkonzo yomthengi eyeyakho kuwo onke amanyathelo endlela.